VKONTAKTE မသွားဘူး - ဘာလုပ်ဖို့ - အရင်ကဆိုရင်များအတွက် - 2019
FaceBook ဖွင့်မထားဘူး - ဘာလုပ်ရမှန်း?
အဘယ်အရာကိုလိုလျှင်, vkontakte go အတန်းဖော်များနှင့်ဤမေးခွန်းများကိုတူသော hacked ပါဘူး - အများဆုံးအမျိုးမျိုးသောဖိုရမ်များတွင်တွေ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြေပါ။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလူများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကလူမှုရေးကွန်ရက်များတွင်နေထိုင်ခြင်း, အစားသူတို့ရဲ့အကောင့်ခိုးယူထားပြီးသို့မဟုတ် spam များကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၏ပြစ်မှုထင်ရှားလျက်ရှိသည်နှင့်မေးခွန်းလွှာမှမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံစာများကိုတှေ့မွငျပုံမှန်အတိုင်းစာမျက်နှာများရုတ်တရက်ဆိုပါကအားလုံး: နောက်ထပ်ပါလိမ့်မယ် ဖယ်ရှားမကြာခဏဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြပါ။ ဒါကကျနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ရန်ကြိုးစားသောအရာကိုပါပဲ။ သင်ရုံမဆိုကို browser အတွက်အဆက်အသွယ်ပွင့်လင်းစာမကျြနှာကိုမကျင့်လျှင်ဒီလမ်းညွှန်ကိုလည်းသင်ကူညီနိုင်သည်တဲ့ DNS ကိုအမှားရေးသားခဲ့သည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အချိန်ကုန်သော။
အဘယ်ကြောင့်ငါဆိုက် Vkontakte သို့မသွားနိုင်သလဲ
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 95% အတွက်အလွယ်တကူမြင်ကြပါသည်အတိုင်း, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအဘယ်သူမျှမလပ်ချိန်ရှိပါတယ်, VKontakte အပေါ်သူ၏စာမျက်နှာကိုသွားပါရန်ကြိုးစားခဲ့, အတန်းဖော်, သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာကနေအခြားလူမှုရေးကွန်ယက်များ, တစ်ရည်းစားပြောပါ - သင်ဿုံရ။ ဒါကြောင့်ဒီသဘောတူညီချက်ကဘာလဲ
အဆိုပါကိစ္စသင်အလွယ်တကူစသည်တို့ကို, download, အစား (သို့မဟုတ်နှင့်အတူ) VKontakte download, ဗီဒီယိုတွေကိုကူညီပေးသည်တဲ့အသုံးဝင်သောပရိုဂရမျ, သင့်အဆင့်တိုးမြှင့်, အခြားလူတစ်ဦး၏စာမကျြနှာ hack နိုင်သည့် "ဗိုင်းရပ်စ်" ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါသည် တကယ်တော့, သငျသညျအမည်ရအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပန်းတိုင်များလိုက်စား, malware ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေကြသည်: သင်၏ password ကိုခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်သိသိသာသာမိုဘိုင်းဖုန်းများအားဖြင့်မှုတ်ရန်။ ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ဒီဤမျှလောက်များစွာသော antivirus program များဖြစ်နိုင်ချေခြိမ်းခြောက်မှုအကြောင်းကိုအကြောင်းကြားလို့မရဘူး, တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဖိုင်ကို start ပြီးတာနဲ့သူကသင်, odnoklassniki.ru နဲ့တခြားဆိုဒ်များ, သင်ကအလွန်ဆင်တူ interface ကိုအတူစာမျက်နှာမြင်ရပါလိမ့်မည် vk.com ကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သည်သှားဖို့ကြိုးစားသောအခါဖိုင်ကိုစနစ်ကကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်မှအချို့သောအပြောင်းအလဲရလဒ်အဖြစ်, file ကို ကြောင်း entry ကိုပြုမိ, သင်မပွုနိုငျဘာဖြစ်လို့၏သောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြမရနိုင်သည်ကျား spam များကိုမေးလ်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုခိုးယူခဲ့သညျ, သငျသညျ, စတာတွေသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည် တကယ်တော့ဤစာမကျြနှာ VKontakte ဖို့ဘာမျှမရှိသည် - ရုံဖော်ပြခဲ့တဲ့အစီအစဉ်၏ရလဒ်သည်အတိုင်း, browser ၏ address bar မှာရိုက်ထည့်ပါဗိုလ်ခြေတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်လိပ်စာ entries တွေကို (မဆိုသံသယမြှင့်ခြင်းငှါမသကဲ့သို့အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ) အထူးလိမ်လည်မှု server ကိုရန်သင့်အားပြန်ညွှန်းနေကြ file ။
SMS ကိုစကားဝှက်ပုံစံလာ - တခါတရံသတ်မှတ်ထားသောတိုတောင်းသောအရေအတွက်အတိအကျကိုစာသားနဲ့ SMS ပို့ဖို့တောင်း, သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်, ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ဖြစ်ပျက်မည်ကိုအားလုံး - ကသင့်မိုဘိုင်းကနေပိုက်ဆံတစ်ဦးစွန့်ပစ်သည်။ Fraudsters ကြွယ်ဝပြည့်စုံ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင့်ရဲ့အကောင့်မှသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို၏ခိုးယူ၏အမှု၌, က spam များကိုပေးပို့ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်: သင့်မိတ်ဆွေများကို VKontakte ဒါပေါ်မဆိုဖိုင်များ, ကြော်ငြာနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လင့်များအပါအဝင်သင်သည်ရန်မဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်သောမက်ဆေ့ခ်ျများ, လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
မည်သည့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့မယ့်ဖုန်းနံပါတ်, သင့်ရဲ့အကောင့်စကားဝှက်တစ်ခုမျှမဖြစ်မနေ SMS ကို activation မလိုအပ်ပါမဝင်နိုင်ပါဘူး။
Windows အ folder ကို - - System32 - ယာဉ်မောင်း - စသည်တို့ကိုပေါ်မှာစနစ် drive ကိုဖွင့်ပါ ပြီးခဲ့သည့်ဖိုင်တွဲ၌သင်တို့ကို Notepad ဖွင့်လှစ်ဖို့ hosts file ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပုံမှန်ပြည်နယ် (ကျိုး photoshop ၏မရှိခြင်းအတွက်) ဒီဖိုင်ကိုရဲ့ contents ပေါ်လာသငျ့သညျ:
# (C) ကို Microsoft (မိုက်ကရိုဆော့ဖကော်ပိုရေးရှင်း), 1993-1999 # # ဒါက Windows အတွက် Microsoft က TCP / IP အသုံးပြုတဲ့နမူနာ host file ဖြစ်ပါတယ်။ # # ဤဖိုင်အမည်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပအိုင်ပီ-လိပ်စာများ၏မြေပုံချထားပုံများပါရှိသည်။ # တစ်ခုချင်းစီကို item သီးခြားလိုင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်ရပါမည်။ အိုင်ပီ-လိပ်စာ # သက်ဆိုင်ရာနာမတော်ဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပထမဦးဆုံးကော်လံထဲမှာထည့်ထားရပါမည်။ # အိုင်ပီ-လိပ်စာနဲ့ host name ကိုအနည်းဆုံး space ခြားပြီးရပါမည်။ ထို့အပြင် # # သည်လိုင်းများအချို့ (ဥပမာ, ဤကဲ့သို့သော) # မှတ်ချက်များဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်, ထိုသူတို့ node ကိုနာမတျောကိုလိုကျနာနှင့်တစ်ဦး '#' # 'သင်္ကေတအားဖြင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် # #: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source ကို server ကို # 38.25.63.10 x.acme.com # client ကို node ကို x ကို 127.0.0.1 localhost
မှတ်စု: သင်, ဘာပဲအကြောင်းပြချက်သည်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် file ကိုဖွင့်လှစ်မထားဘူးလုံခြုံ mode မှာကွန်ပျူတာကို restart အဲဒီမှာအားလုံးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်လျှင်။ ကွန်ပျူတာစာနယ်ဇင်း f8 ပြီးနောက်ဘေးကင်းလုံခြုံ mode ကိုမှ boot နှင့် menu ကနေတစ်ခုကို select လုပ်ပါရန်။လုံခြုံစွာသူတို့ကိုဖယ်ရှားဖိုင်ကို save - မျဉ်း 127.0.0.1 vk.com လိပ်စာများ, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru သည်အခြားပေါ်လာအချို့မှတ်တမ်းများနေဆဲရှိပါတယ်စက်တွင်းသို့လျှင်။ တစ်ခါတစ်ရံဗိုလ်ခြေဖိုင်အပို entries တွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဗလာအာကာသပြီးနောက်, အောက်ခြေမှာတစ်နေရာရာမှာတည်ရှိနိုင်ပါသည် - သင်ကစာသား eto.Krome, ဤသို့ပြုပိုင်ခွင့်အိုင်ကွန် "My Computer ကို" ပေါ်တွင် click လုပ်, select လုပ်တောင်မှအနိမ့် scrolled နိုင်တွေ့မြင်လျှင် context Menu က, ထို့နောက် "ရှာရန်" - "ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ" နှင့် vkontakte.exe ဖိုင်အဘို့သင့်ကွန်ပျူတာစစ်ဆေးပါ။ ဖိုင်ကိုရုတ်တရက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဆိုပါက - သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ udalyayte.Zatem နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုမှန်ကန်စွာပြုလေ၏လျှင်, ဒါပေမယ့်ပြဿနာကကျနော်တို့သင့်အကောင့်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်, သာဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်သည်, မိမိစကားဝှက်ကို vkontakte နှင့်အတန်းဖော်ကိုပြောင်းလဲပြုလုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏စာမကျြနှာမရရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်အဖြစ်ခိုးယူဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဖြစ်ကောင်းသင်အမှန်တကယ်ဖဲ့နေကြသည်အားလုံးပြီးနောက်, စစျဆေးဖို့သဘာဝကျပါတယ်။ (သင်လည်းဦးဝင်း + R ကိုသော့ကိုနှိပ်အဲဒီမှာ cmd ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်), Run ကိုရိုက်ထည့်ပါ cmd ဖိအားများသောစာရိုက် - Start ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် command prompt ကို run လိုက်ပါ။ အဆိုပါ command prompt ကို, type ကို nslookup vk.com (သို့မဟုတ်သင်မသွားနိုင်ကြောင်းအခြားမည်သည့်လိပ်စာ) မှာ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကျနော်တို့ဆာဗာများ vkontakte မှသက်ဆိုင်ရာပုံ IP လိပ်စာများကိုကြည့်ပါ။ ကြောင်း, တူညီတဲ့အမျိုးအစားက command ping ရဲ့ vk.com ပြီးနောက်ကြောင့်တိကျတဲ့ IP လိပ်စာနှင့်အတူ packets တွေကိုဖလှယ်လည်းမရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဒီလိပ်စာပထမဦးဆုံးအသင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာဖော်ပြထားတဲ့တစ်ဦးအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပါကသင့်အကောင့်အမှန်ပင် VKontakte အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့ထားပြီးဆိုလိုသည်။
ဒီ VC ကိုမှပိုင်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းလိပ်စာများ
ကျနော်တို့ VKontakte ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာကြှနျုပျတို့သညျသှားသောအရာကိုလိပ်စာစစ်ဆေး
အခြားသောနည်းလမ်း - ip လိပ်စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတည်ပြုရန် Whois န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အခါ ping ရဲ့ command ကို vk.com ပြသပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, လိပ်စာမှတ်မိသို့မဟုတ်ရေးချ, ဒီလိပ်စာ //www.nic.ru/whois/ နှင့်ရိုက်ထည့်သွားပါ။ ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျအောကျပါစာမကျြနှာကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။
လိပ်စာကယ့်ကိုလူမှုရေးမှပိုင်ဆိုင်သည်။ ကွန်ယက်ကို Vkontakte
က IP ကို-လိပ်စာ Vkontakte ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းညွှန်ပြလျှင်,, တဖနျ, သင့်အကောင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့နေသည်ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံရှိရာ (အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့) သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်ပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် - ကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စာမျက်နှာကိုသွားဖို့ကြိုးစားလျှင်အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလုပ်နေတာပြီးနောက်, သင် password ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းကြောင်းအကြောင်းကြားနေတယ်ဆိုရင်, အဲဒါကိုဟက်ကာများအားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးသည်။ အထောက်အပံ့ site ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခြေအနေကရှင်းပြအများစုဖွယ်ရှိသင်အစည်းအဝေးကိုသွားပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင့်အကောင့်အမှန်တကယ်သူကိုစပမ်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအဘို့အ VKontakte အုပ်ချုပ်ရေးသော့ခတ်ခဲ့သည့်နောက်, hacked ။ တနည်းကား, အခြားကွန်ပျူတာကနေစစ်ဆေးပါ။ သငျသညျတူညီသောသတင်းစကားနှင့်အတူကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျှင်, အဘယ်သို့မိန့်, ပူးတွဲပါညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်နှင့်အပေါငျးတို့သပါ။ သငျသညျမကူညီဘူးဆိုရင် - နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု VKontakte ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သူတို့အားအခွအေနကရှင်းပြသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုအမည်, ဖုန်းနံပါတ်, လုံခြုံရေးမေးခွန်းရဲ့အဖြေအဖြစ်သင်အကောင့်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ရာများအတွက်ဒေတာ, အပေါငျးတို့သပါစေ
//remontka.pro/ne-otkryvayutsya-kontakt-odnoklassniki/ ဤအလုပ်၏အဘယ်သူအားမျှ, အခြားသောလမ်းကြိုးစားလျှင်
ဗီဒီယို Watch: Facebookမ add friend နfollows ပတ. u200bနည. u200b. u200b (နိုဝင်ဘာလ 2019).